China Swivel Office Chair Manufacturers Fabric Mesh Stylish Ergonomic Office Chair Ho an'ny ora maro Mipetraka orinasa sy mpamatsy |GOODTONE
Seza miodina biraon'ny lamba harato
Mid back office swivel seza ;
Mesh lamosina, bobongolo seza misy lamba;
3 toerana manidy mekanika; sliding seza
Gaslift KGS, Φ60mm PU caster
harato:Grey, Black, Blue, Red, Green
Ny toe-tsain'ny fiainana "miverina amin'ny maha-izy azy" no loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny fomba minimalista VIX.Avelao ny antsipirian'ny famolavolana tsy misy ilana azy, amin'izay dia mampihena ny fahatsapana ny famerana ny maso, avelao ny famolavolana hiverina amin'ny fampiononana sy ny fampiharana, ary hanome ny olona tony sy milamina.
Nahatratra ny marimaritra iraisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipan'ny famolavolana tsara indrindra Koreana Tatsimo Design JOYN mba hamolavola vokatra mifanaraka amin'ny fomba fanaony sy ny filana samihafa ho an'ny tsena Aziatika avo lenta.
Atsofohy amin'ny toerany ny chassis ary hidio amin'ny bokotra iray.Azo antoka sy tsy mipoaka, miakatra sy midina;Korea KGS 4 (fitsaboana nitriding) fanerena rivotra bar dia miorina sy azo itokisana.
Mifehy ny fomba lamaody vaovao,
Ny lalan'ny fifehezana,
Ny loko malaza farany indrindra,
havia sy havanana
teo aloha: Seza biraon'ny Lounge Kely Ambany Lamosina
Manaraka: Seza birao feno harato avo lamosina
Tetikasa Ergonomic Office Computer Chair
Foshan birao seza ambongadiny Ergonomic mora...
Seza biraon'ny mpanatanteraka hoditra Upholstery
Seza Mihodikodina amin'ny biraon'ny birao avo lenta volondavenona
Toeram-piasan'ny mpanatanteraka ivom-baravarana raikitra
Mpanamboatra seza ergonomic Mesh Lamba Conte...
Seza mihodinkodina maoderina Seza Mpanatanteraka Luxury Seza tohana ho an'ny lumbar ho an'ny trano Seza birao hoditra Seza birao avo lenta seza misy tanjona maro